दुबईमा लुगा सिउँदा निजगढमा मायाको ‘धागो’ चुँडियो ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
फागुन २७, २०७५ सोमबार १३:१९:१५ | मिलन तिमिल्सिना
माया र मौसमको के भर ! केहीबेर अघिसम्म न्यानो घाम लाग्दैथियो । उतिखेरै आकाशमा बादल मडारियो । हावाहुरी चल्न थाल्यो । गर्न खोजेको कामलाई मौसमले साथ दिएन । त्यसपछि सडक छेउमा कामको पर्खाईमा बसेका कुमार सुन्दास लुगा सिउने मेसिन काखी च्यापेर लखरलखर फर्किनुभयो ।
भोलिपल्ट उसैगरी धोबीघाट चोक पुग्नुभयो । मेसिन अघिल्तिर राखेर बस्नुभयो । धेरैबेर पर्खंदासम्म कोही आएनन् । अनुहार आकाशमा लागेको बादलजस्तै अँध्यारो भयो ।
अर्को दिन आकाश अलिअलि खुल्यो । अघिल्लो दिन निराश अनुहार बनाएर बसेका कुमारको अनुहारमा थोरै चमक देखियो, खुलेको आकाशजस्तै । किनकी उहाँले दुई दिनपछि काम पाउनुभयो, फाटेको लुगा सिउने । आकाश थोरै खुल्दा अलिकति आश बोकेर काम गर्ने कुमारको जिन्दगीमा घामभन्दा धेरै बादल मडारिएको छ ।
आफूले सबैभन्दा माया र विश्वास गर्ने मान्छे मौसमजस्तै बदलिए । अरुको लुगा सिएर बस्दा आफूले बलियो ठानेको विश्वासको धागो चुँडियो । फाटेको लुगा त जति पनि सिउन सकिन्छ, तर आफ्नै जिन्दगीमा चुँडिएको धागो गाँस्न मुस्किल पर्यो । चुँडिएको धागोले बेलाबेला अल्झाइरहन्छ । किनकी त्यो धागोसँगै कुमारका धेरै सपना र पसिना पनि चुँडिएर हराएका छन् । अहिले त्यही धागो चुँडिएर बनेको भ्वाङ टाल्ने उपाय खोज्दै उहाँ धोबीघाटमा ओहोरदोहोर गर्दै हुनुहुन्छ ।
निजगढदेखि दुबई हुँदै धोबीघाटसम्मको यात्रा
बारा निजगढको सुकुम्बासी बस्ती । आफ्नो नाममा धनसम्पत्ति र जग्गा जमिन केही छैन । आफू ११ वर्षको हुँदा बावु बिते । हजुरबा अरुको लुगा सिउने काम गर्थे । बावु नभएपछि सुन्दासलाई फुपू र फुपाजुले लगेर पाले । उनीहरु पनि लुगा नै सिएर गुजारा गर्थे । कुमारलाई फुपाजुले नै लुगा सिउन सिकाए । पढ्न पनि पाइएन, अरु काम पनि जानिएन । सानोमा जे सिक्यो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुबाहेक अर्को उपाय थिएन ।
बिहेबारी भयो । तीन छोराछोरी जन्मिए । परिवार थपिंदै गएपछि गुजारा चलाउन समस्या पर्न थाल्यो । आफ्नै नामको सानो घर, थोरै जग्गा अनि जहान र बालबालिकाको अनुहारमा सन्तुष्टिको रेखा देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटीले सताउन थाल्यो ।
भन्छन् नि –तँ आँट, म पुर्‍याउँछु । विदेश गएर धेरै कमाउने सपना बोकेका कुमारको आँटलाई गाउँकै साथीभाइले साथ दिए । दुबईको एक कारखानामा लुगा सिउने काम मिल्यो । अनि घरको लुगा सिउने मेसिन थन्काएर कुमार सपनाको भारी बोकेर दुबई पुग्नुभयो ।
दुबईमा काम पनि भनेजस्तै मिल्यो । ‘सेना, प्रहरी र सुरक्षागार्डले लगाउने कपडा सिलाउनुपर्थ्याे , निकै सजिलो थियो काम’ कुमार ती दिन सम्झँदै भन्नुहुन्छ, ‘पैसा पनि ठिकै थियो ।’
काम पनि सजिलो, पैसा पनि भनेजस्तै । काम गर्न विदेश जानेलाई योभन्दा सन्तुष्टि अरु के नै हुन्थ्यो र ? काम र कमाइले गद्गद् भएका कुमारले हातमा पैसा पर्नेबित्तिकै घर पठाउन थाल्नुभयो । बेलाबेला आफू फर्किंदा पनि घरमा पैसा छोड्नुहुन्थ्यो । श्रीमती र छोराछोरीको हँसिलो र भरिलो अनुहार हेरेर फर्कनुहुन्थ्यो ।
परिवारको अनुहारमा त चमक भरिन थाल्यो, अब आफ्नै नामको घर र जग्गा जोड्नुथियो । बाँकी रहेको यही सपना पूरा गर्न कुमार दुबईमा लुगा सिलाइरहनुभयो । घरगाउँको यादले बेलाबेला सताउँथ्यो । तर त्यो यादलाई सपनाले जित्यो । धेरै कमाउने र घर बनाउने सपना बुन्दै उहाँ एकोहोरो लुगा सिलाउनै व्यस्त हुनुभयो ।
एकदिन लुगा सिइरहँदा छोराले फोन गरेर भन्यो ‘आमाको चाल ठिक छैन बुवा, छिटो घर आउनुहोस् ! “छोराका कुराले कुमारको मन पोल्यो, आँखा वरपर जताततै अँध्यारो भयो । सिइरहेको लुगा थन्क्याएर साहुसँग कुरा गरि घर फर्किदा घरमा न श्रीमती थिइन्, न त कुमारले पठाएको पैसा थियो ।
११ वर्षसम्म दुबई बस्दा कति कमाएँ र कति घरमा पठाएँ भन्ने हिसाब पनि छैन उहाँसँग । ‘पहिले पुगेकै थियो हिसाब गरिएन, कमाएजति सबै उसैलाई पठाएँ, फर्किंदा केही बाँकी थिएन’ कुमारले खुइय सुस्केरा हाल्नुभयो ।
उहाँको अनुमानमा झण्डै १४/१५ लाख रुपैयाँ डुब्यो । श्रीमतीलाई विश्वास गर्दा सबै सपना चकनाचुर भयो । आफूले सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेको मान्छेले नै ठूलो धोका दिन्छ भन्ने कसले पो सोचेको हुन्छ र ? तर जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ यस्तै नसोचेको भैदिन्छ । आफूले गुन लगाएकै मान्छे बैगुन बन्दिन्छ, अनि कहिल्यै नबिर्सने चोट सहनुपर्छ । यस्तै भैदियो कुमारलाई पनि । भत्केको घर र फाटेको जिन्दगी टाल्नकै लागि दुबईमा लुगा सिउन जाँदा माया र प्रेमले बनाएको सम्बन्धको धागो चुँडियो ।
श्रीमतीसँगको सम्बन्धलाई उहाँ लुगा सिउने धागोभन्दा पनि बलियो ठान्नुहुन्थ्यो । लुगाको धागो त बेलाबेला उध्रिन्छ, तर दुईटा जिन्दगी जोड्ने धागो त उध्रन नपर्ने । तर उहाँले बलियो ठानेको धागो नै चुँडियो ।
‘आफ्नै मान्छेलाई विश्वास नगरेर कसलाई गर्ने, तर आफ्नै तन र मनलाई पनि कहिलेकाहीँ विश्वास गर्न नहुने रहेछ’ कुमारले पछुतो मान्दै भन्नुभयो ।
जे हुनु भैसक्यो । पछुतो मात्रै मानेर पनि जिन्दगी चल्दैन । फाटेको तन र मन सिलाउन कुमारलाई अर्को धागोको आवश्यकता थियो । विदेशबाट फर्किएपछि उहाँको यो आवश्यकता पूरा भएको छ ।
साथमा अर्की श्रीमती छिन् । अर्की श्रीमतीबाट एक छोरा जन्मिएका छन् । पहिलेका दुई छोरा र एकछोरी पनि सँगै छन् । परिवार मिलेर बसेको छ । पुरानो धागो चुँडिए पनि नयाँ धागो फेर्न त सफल हुनुभयो, तर पहिलेको धागोले बेलाबेला अल्झाउँछ । किनकी धागोसँगै उहाँको पसिना उडेको छ । त्यही धागो चुँडिएर फाटेको सपना पूरा गर्न र भ्वाङ टाल्न उहाँ अहिले धोबीघाटको चोकमा ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ ।
दोबाटोमा बसेर सजिलो छैन काम गर्न
कुमार हरेक दिन लुगा सिउने कल बोकेर धोबीघाट चोक पुग्नुहुन्छ । बाटोको छेउमा बस्नुहुन्छ । मौसम बदली भएको दिन काम गर्न सकिंदैन । किनकी झ्यार्र पानी पर्दा र सिरसिर हावा चल्दा पनि लुगा सिउन सकिँदैन । कहिले धागो उडाएर लान्छ, कहिले सिउनै नमिल्ने गरी धागो भिज्छ ।
‘त्यसमाथि बाटोमा बस्दा धेरैले विश्वास गर्दैनन्’ कुमारले भन्नुभयो, ‘आज लुगा छोडेर जाँदा भोलि आउँदैन कि भन्ने धेरैलाई लाग्दो रहेछ, त्यसैले नयाँ लुगा सिउन त कोही आउँदैनन्, पुराना उध्रिएका लुगा मात्रै सिउने हो ।’
त्यही पुराना लुगा सिउने काम पनि सधैं पाईंदैन । कहिले एक रुपैयाँ पनि हुँदैन, कहिले दिनको ५/७ सय रुपैयाँ पनि हुन्छ ।
एउटा कोठा लिएर लुगा सिउने पसल खोल्न पाए पहिले परेको भ्वाङ टाल्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ, कुमारलाई । ‘हातमा सीप छ, काम गर्ने जाँगर पनि छ, तर ठाउँ छैन’ पुर्पुरोमा हात राखेर बसेका कुमारले भन्नुभयो ।
सरकारले विदेशबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण दिन्छ भन्ने पनि उहाँले सुन्नुभएको छ । तर ऋण लिन चाहिने धितो उहाँसँग छैन । ‘मेरो नाममा जग्गा जमिन केही छैन, के धितो राखेर ऋण लिने ?’ कुमारले भन्नुभयो, ‘हामीजस्ता केही नहुनेलाई सरकारले बिनाधितो ऋण दिने हो भने देशमै बसेर पनि कमाउन सकिन्थ्यो ।’